Maitiro ekuchinjisa WhatsApp machats kubva ku iPhone kuenda kuApple kana zvinopesana | IPhone nhau
Ignatius Room | | Updated on 10/04/2020 19:08 | Android, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Ese ari maviri maApple neApple anotipa mikana yakawanda yekudzivirira kurasikirwa nedhata sekureba isu tiri pachikuva chimwe chete. Iwo ma backups muICloud kana muakaundi yedu yeGoogle anoita kuenda kubva kune imwe Android kuenda kune imwe kana kubva kune imwe iPhone kuenda kune imwe kutamba kwemwana uye kuti isu hatirasikirwe nezvose zvirimo izvo yedu yapfuura smartphone yaifanira kukwanisa kuenderera neiyo nyowani se dai pasina chaizoitika. Asi ¿chii chinoitika kana tichida kuenda kubva ku iPhone kuenda kuApple kana kubva kuApple kuenda ku iPhone?
Mune ino kesi zvinhu zvinoshanduka zvakanyanya. Iko kunyorera kuri mubvunzo kunogona kunge iine maseva ayo ekuchengetedza iyo data uye kuti inowirirana nezvose zviri zviviri Android neIOS, sezvazviri neTeregiramu, uye ipapo shanduko ichave isinganzwisisike, asi kana zvisiri, sekune WhatsApp, chokwadi chiri kuti zvichanetsa kuti usarasikirwe nematauriro edu ese uye mafoto kana uchibva kuIOS kuenda kuAlex kana zvinopesana. Asi kune nzira dzekuzvizadzisa uye pano isu tinokuudza iwe yakanyanya kunanga uye yakapusa.
Maitiro ekuchinjisa WhatsApp chats kubva ku iPhone kuenda kune Android, kana zvinopesana, inogona kuwedzera kuomarara, zvichienderana nechishandiso chatinoshandisa. Vakomana veTenorshare vakaisa patiri kushandisa iCareFone application, chikumbiro icho, mukuwedzera pakutibvumidza chinja WhatsApp data kubva kune imwe nharembozha kuenda kune imwe, inotibvumidzawo kutumira mifananidzo kubva kune yedu iPhone, iPad kana iPod touch kukomputa yedu kuwedzera kuTunes, kuteedzera mimhanzi, mabhuku uye mifananidzo kune yedu kifaa, bvisa zvinoshandiswa ... zvese pasina kushandisa iTunes chero nguva
Kupfuudza iyo WhatsApp data kubva kune yako iPhone kana kuenda kune yeApple foni, iine iCareFone iri nyore (yakakosha) uye nekukurumidza maitiro (matanho ekutevera), nekuti nguva yekupedzisira inoenderana nehuwandu hwemifananidzo nemavhidhiyo atakachengetera yedu WhatsApp account yemudziyo wedu. Maitiro zvakangofanana kune ese mashandiro masisitimu.
Kana tangomhanya kunyorera iCareFone, isu tinofanirwa batanidza zvese zvishandiso, sosi uye kwainoenda kune komputa yedu uye kuburikidza nesarudzo sarudza iyo ichave iyo sosi yedata (kubva kune iyo terminal yatinoda kutora iyo data) uye yekuenda terminal (kune iyo terminal yatinoda kutevedzera ivo). Kana uchinge wasimbiswa, tinya Transfer (kwatiri, isu tichaendesa WhatsApp machats kubva kune iPhone 6s kuenda kune Samsung Galaxy).
Kana tangodzvanya pane bhatani rekutamisa, iko kunyorera kuchachengeta gadzira kopi yedata rese kukombuta yedu, kusanganisira zvese zvakabatanidzwa uye zvichagadzira yekudzoreredza faira iyo ichadzorera, regerera iyo redundancy, iyo yekushandisa mudziyo
Sezvandakareva mundima dzapfuura, zvinoenderana neruzivo rwatinaro mukopi yedu yeWhatsApp, maitiro acho anogona kutora yakawanda kana shoma nguva. Panguva yese iyi maitiro, Hatifanire kubvisa chero zviteshi kubva kumakomputa izvo zviri chikamu chezviitiko kana tisingade kuti maitiro acho asaitwe nemazvo.
iCareFone inowanikwa zvese zviri zviviri Mahwindo nezve macOS.
Kuti tiite iri basa rakaoma tinogona kuwana nzira dzakasiyana kwazvo pa internet, mazhinji acho akaomarara uye haashande, kana mune akanakisa kesi ivo vanongoita zvishoma. Pazvisarudzo zvese zvakaedzwa, iyo yakandipa mhinduro dzakanakisa yaive yeWindows uye Mac application «dr. fone »uye Tenorshare iCareFone iyo iwe yaunogona kurodha pasi kubva Iyi link uye kuti iwe unogona kuedza zvemahara. Icho chikumbiro chinoita zvinopfuura kungoendesa mameseji kubva kuIOS kuenda kuApple, asi muchinyorwa chino chinotifadza ndizvo chaizvo, saka tichazotarisa pane icho chinhu.
Aya ndiwo maratidziro ainoita iwe nefoni yako yeApple
Kana iko kunyorera kurodha pasi pakombuta yedu, tichachiita uye tobatanidza izvo zviviri zvishandiso kuburikidza nekwavo tambo dzeUSB kuMac kana PC. Tinofanira kugamuchira meseji dzese dzinoda mvumo dzinoonekwa, kunyanya pafoni yeApple panowanikwa software inodiwa. kuitira kuti zvese zvishande sezvazvinofanira. Kana zvese zvave kugadzirira, isu tichaenderera mberi nekupinda chikamu chinotinakidza: "Backup uye kudzoreredza".
Muhwindo rinotevera tinosarudza kuruboshwe bar bhaa sarudzo "Backup uye kudzorera WhatsApp", uye sarudzo dzakasiyana dzatinogona kuita dzine chekuita neMessage application dzinoonekwa. Mune ino kesi isu tinosarudza yekutanga: «Chinjana WhatsApp meseji».
Midziyo yedu miviri inozoonekwa, iyo sosi yedhata kuruboshwe uye inogamuchira kurudyi. Iyi dudziro yakakosha nekuti isu tinofanirwa kuve nechokwadi chekuti vanoiswa munzvimbo chaipo, sezvo chishandiso kurudyi, iyo ichagamuchira iyo data, icharasikirwa neruzivo rwese rweWhatsApp rwaifanira kudzoreredza iyo nyowani. Kana odha yacho isiriyo, tinya pane bhatani repakati «Flip». Kana tangosimbisa kuti mudziyo wekutanga uri kuruboshwe uye kwainoenda kuri kurudyi, tinogona kubaya pane bhatani rekuti «Kutamisa».
Maitiro anotora maminetsi akati wandei, saka shivirira, uye kunyangwe iwe uchifunga kuti iko kushanda kwavharirwa, mirira kuti ipedze. Kana kuchinjisa kwapera, tinofanira kuenda kunzvimbo yekuenda uye tinoteedzera nhanho dzakaratidzwa. WhatsApp ichaonekwa kwatiri sekunge tanga tangoiisa, uye isu tichafanira kugadzirisa nhamba yedu yefoni mairi. Panguva ino zvichave zvakafanira kudzoreredza iyo data inochengetwa mundangariro yedu yemukati, seizvo WhatsApp pachayo ichatitaurira, kuitira kuti iyo data rese ratakatamisa kubva ku iPhone yedu riendeswe kune iyo nyowani Android.
Maitiro akareruka aine mashoma akakosha mapoinzi atinofanira kungwarira kuti tisarase ruzivo, asi nemirairo iyi hauzove nedambudziko diki rekuzviita. UyeMhedzisiro mhedzisiro ndeyekuti iwe unenge uine yako ese WhatsApp mameseji mune nyowani terminal, kunyangwe ichifanira kucherechedzwa kuti haina kukwana, nekuti machats anoita kunge akashata, uye nhaurwa dzawakange wakachengeta dzinoonekwa pakati. Asi izvo zvinogadziriswa nemaminetsi mashoma ekugadzirisazve yako WhatsApp, uye chakakosha chinhu, inova meseji, mapikicha nemavhidhiyo, zvichave zvisingabatike.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Kupikisana » Android » Maitiro ekuchinjisa WhatsApp chats kubva ku iPhone kuenda kuApple kana zvinopesana
Izvo zvekuburitsa zvinongedzo pane yepamutemo webhusaiti hazvishande. Chero mhinduro? Ndave nemusoro uchizama kuendesa ese WhatsApp kubva kuIOS kuenda kuAroid kwemwedzi mumwe.
Izvo hazvishande sezvo zvichida iyo yakabhadharwa vhezheni, zvikasadaro sarudzo yekupfuura WhatsApp haina kubvumidzwa, pane imwe nzira yekuzviita?
Jair Aicardo Usme Soto akadaro
Izvo hazvishande, zvese zvakanaka kusvikira iwe uchinge uchipa iko kuchinjisa, uko inokumbira iwe kuti utenge iyo, ndiko kuti, iyo vhezheni yekutongwa haina chaizvo kuita chero chinhu. Chero mhinduro?
Pindura Jair Aicardo Usme Soto
Zvakaipisisa zvakadaro, iwe unotenga iyo show. Hazvina basa, zvakakosha kuti nhaurirano dzorere…
Iwe tevera maitiro ese …… hazvina basa, magumo akanaka….
Uye kana yapedza kudzoreredza iyo whatsapp ... zvinoita sekunge uchazviita ... asi kwete.
Unosimbisa nhamba yako yefoni, uye inokuudza kuti utore kopi ... Asi svetuka kuti utore kopi yeDrive ...
Izvo hazvigoneke kudzoreredza iyo yemuno kopi chero kupi.
Iwe unofunga kuti waita chimwe chinhu chisina kunaka uye wotangazve ...
Uye iwe unowana WhatsApp, mushure mekumisikidzwa katatu, kukuvharira kwemaawa mashoma uye isingakutenderi kuti uone nhamba yacho.
Uye hauchisina kopi kana whatsapp.
Final ... haishande mushure memashanu kuyedza. Pakupedzisira zvinoita kunge hazvidzorere ... zvinonyadzisa.
Pindura kune Iyo Scammer
Ngirozi VD akadaro
Chirongwa hachipe mukana wekubva kuApple kuenda kuIOS, chete kubva kuIOS kuenda kuAroid, ipapo zita rekuti tb inhema.
Pindura Mutumwa VD
Ndakaitenga mwedzi yapfuura apo iphone yangu yakavharwa uye pandakada kuishandisa zvakare kuendesa mafaera, yaida kuti ndiutenge zvakare ...
hazvishande, vanokumbira kunyoresa kuti vaenderere neshanduro yemahara uye pakupedzisira zvese kumanikidza kutenga. Ihwo hunyengeri
Pindura kuna eq
Ndatenda! Ndinofanira kubvuma kuti pandakaverenga zvataurwa zvekare ndakatya uye ndakafunga kuti chitsotsi, asi zvanga zvisina kudaro, mamessage angu ese, maphotos nemawhatsapp audios akapfuudzwa, zvakashata asi zvandaida zvakawanikwa.
Wakazviita sei? vagovana mari yekubhadhara account
Pindura kuna emilio
Kumbira iwe kuti utenge chirongwa ichi ...
R. Fdez akadaro
Chokwadi "demo" haishande kuendesa WhatsApp, uye chirongwa ichi chinodhura sezvo ini ndichingoda chete kuita ka1.
Ivo vanofanirwa kuve vakajeka uye kumberi kutaura kuti chirongwa chakabhadharwa, nguva, kwete kupa "demo". Zvirinani kuisa vhidhiyo uye nguva, usatambise nguva yangu. Ahhh uye chirongwa chakashata chaindipfuura, hachipe mukana wekuvhara icho, ndaitofanira kumanikidza kubuda kuti ndivhare.
Pindura kuna R. Fdez
Jekesa muchinyorwa chako kuti chirongwa ichi chabhadharwa, saka tinodzivirira kuchiisa.
Chinyorwa ichi chinotaura zvakajeka "unogona kuzviedza mahara" uye ndizvo zvakaitika muna Ndira 2018, payakaburitswa. Izvozvi handizive. Zvisinei, unogamuchirwa.
Iron Arthur akadaro
Haisi yemahara uye haishande mushe pane dzakawanda nguva.
Pindura kuna Arturo Hierro
Izvo hazvishande, iniwo ndatora matatu kuyedza uye hapana. Izvi zvinhu zvinokushungurudza zvakanyanya zvekuti pakupedzisira unosvika pamhedziso yekuti iwe unofanirwa kubhadhara. Asi iwe unopedzisira wasarudza imwe application isiri Dr foni, nekuti iwe wakanyengedzwa.
Pindura kuna Asun
Asun, uye pakupedzisira nekushandisa kupi iwe wakazviwana? Ndatenda.
Ini ndoda kufambisa iyo whats app chats kubva ku iPhone X kuenda kune Samsung Galaxy Cherechedzo 20. Ini ndoda kuziva kuti ndeipi trade ivo vanozviita?
Apple inotangisa yemahara batch yekugadzirisa chirongwa chePad Air Air 3
Apple inokurudzira vamwe vevashandi vayo vanoshanda kubva kumba